​दाइजो नपाउँदा २० लाखको सुपारी दिएर बाबुको हत्या, दाजु र आमाको हत्या योजना असफल
काठमाडौं । दाइजो नपाएको रिसमा भाडाका अपराधी प्रयोग गरी एक युवतीले राजधानीमा बुबाको हत्या गरेकी छिन् । नुवाकोट सुन्दरादेवीकी २० वर्षीय संगीता पाण्डे (महर्जन)ले बुबाको सम्पत्ति खान २० लाखमा सुपारी..
दुर्इ छोरीको हत्यापछि आमाले गरिन् आत्महत्या
सर्लाही । दिनहुँ घरमा सासु र श्रीमानसँग हुने गरेको झगडा सहन नसकेर मंगलबार सर्लाही, हरिपुर्वा–५ की २५ वर्षीया सोभिता देवी यादवले आफ्ना छोरीहरु ५ वर्षीया मन्दिरा कुमारी र २ वर्षीया..
मैना सुनुवार हत्याकाण्डको मुद्दा फेरि व्युँनियो
युवराज पाण्डे बनेपा । द्वन्द्वकालमा किशोरी हत्याको आरोप लागेका नेपाली सेनाका चारजनालाई जिल्ला अदालत काभ्रेपलाञ्चोकले अदालतमा हाजिर नभएको भन्दै दुई वर्षअघि ‘मुलतबी’मा राखिएको मुद्दा ब्युँतिएको छ । पीडित पक्षले दोषीमाथि कारबाही नभएको..
​तारा एयरको विमान दुर्घटनाको उद्धारमा कठिनाई, शव छरिएको अवस्थामा
म्याग्दी । विमान दुर्घटना भएको ठाउँ म्याग्दीको दाना गाविस–२ स्थित सोलीघोप्टे भीर वरपर बाक्लो हुस्सु लागेका कारण उद्धारमा कठिनाइ भइरहेको छ । प्रतिकूल मौसमका कारण दुर्घटनास्थलमा उद्धारका लागि आएका दुई वटा..
​छोरीले गरिन बाबुको हत्या, छोरीसहित संलग्न सात जना पक्राउ
काठमाडौँ । महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखाले बाबुको हत्यामा संलग्न छोरीसहित सातजनालाई पक्राउ गरेको छ । महाशाखाबाट खटिएको टोलीले मृतककी छोरी सङ्गीता महर्जनसहित सातजनालाई मङ्लबार पक्राउ गरेको हो । पक्राउ पर्नेमा नुवाकोट घर..
तारा एयरको बेपत्ता विमान म्याग्दीको सोली घोप्टेभीरमा दुर्घटनाग्रस्त अवस्थामा फेला
पोखरा । बुधबार बिहानदेखि सम्पर्कविहीन भएको तार एयरको नाइन एन ए एच एच जहाज म्याग्दीको सोली घोप्टेभीरको पुछारमा केकरको बुटा भनिने जंगलमा दुर्घटनाग्रस्त अवस्थामा फेला परेको छ । पर्यटन मन्त्री आनन्द पोखरलले..
​भूकम्पपछि मात्र सिन्धुपाल्चोकमा तेह्र बलात्कृत, पाँच बालिका र आठ युवती
मेलम्ची । सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा भूकम्पपछिको दश महिनामा पाँच बालिका र आठ युवती तथा महिला गरी १३ जनालाई जबर्जस्ती करणी गरेको अभियोगमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिन्धुपाल्चोकमा मुद्दा दर्ता भएको छ ।..
​हराईरहेको तारा एयरको विमानमा को–को छन् सवार ?
काठमाडौं । पोखराबाट जोमसोमका लागि बुधवार विहान ७ बजेर ५७ मिनेटमा उडेको तारा एयरको 9NAHH ट्वीनअटर विमान सम्पर्कबिहीन भएको छ। सम्पर्कबिहीन रहेको तारा एयरको उक्त विमान बरिष्ठ पाइलट रोशन मानन्धरले उडाएका थिए।..
​तारा एयरको विमान म्याग्दीको दानामा दुर्घटना भएको भन्दै स्थानीयले खबर गरे, सुरक्षाकर्मीको टोली परिचालन
काठमाडौं । पोखराबाट जोमसोम उडेको तारा एयरका म्याग्दीको दाना गाविसमा दुर्घटना भएको भनेर स्थानीयले प्रहरीलाई खबर गरेका छन् । सशस्त्र प्रहरीका डिआइजी नरेन्द्रकुमार सिंहले अनलाइनखबरलाई दिएको जानकारी अनुसार आसपासका जिल्लाबाट समेत..
विमान उडेको ८ मिनेटमा हरायो, मौसम खरावको कारण खोजीकार्यमा सकस
काठमाडौ । पोखरादेखि जोमसोमको लागि उडेको तार एयरको ९ एन एचएच विमान उडेको ८ मिनेटपछि सम्पर्कविहीन बनेको तारा एयरले जनाएको छ । उक्त विमान विहान ७ बजेर ४५ मिनेट जाँदा..
​पुनःनिर्माणमा आत्मबल बढ्यो–प्रधानमन्त्री ओली
गुजरात । भारतको राजकीय भ्रमणमा रहनुभएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गुजरातको भुजस्थित भूकम्पपछिको पुनःनिर्माण कार्यले नेपालको पुनःनिर्माण गर्ने कार्यमा आत्मबल बढेको बताउनुभएको छ । भूकम्पपछि पुनः निर्माण भएको भुज सहरको अवलोकनपछि..
अमेरिका, फ्रान्स र बेलायतका पत्रिकामा मोदीको आलोचना
एजेन्सी । भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी कुनैबेला प्रशंसाको शिखरमा थिए । विश्व मै उनको व्यक्तित्व र भाषणको चर्चा हुने गरेको थियो । उनै मोदी अहिले सर्वत्र आलोचनाको पात्र बन्न थालेका..
प्रधानमन्त्री ओलीको भ्रमणले नेपाल–भारत सम्बन्धमा ‘आइसब्रेक’
काठमाडौं । भारतको राजकीय भ्रमण सुरु गर्नुअघि ६ असोजमा गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भनेका थिए, ‘मेरो भारत भ्रमणको एउटै एजेन्डा हो, दुई देशको सम्बन्ध सुधार गर्नु ।..
भरियालाई अहिलेसम्मकै ठूलो दुई अर्ब जरिवाना !
काठमाडौं । रोजगारीमा मलेसिया पुगेका पर्सा निर्मलबस्ती घर भएका पदमबहादुर राउत फर्किएको केही दिनमै साढे दुई अर्बभन्दा धेरै डलर अपचलनको अभियोगमा पक्राउ परेका छन् । तीन करोड ३४ लाख ६० हजार..
नाकाबन्दी समस्या समाधान हुनेमा ढुक्क हुन सकिन्न प्रचण्ड
काठमाडौँँ । एकीकृत नेकपा (माओवादी)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारत भ्रमणका क्रममा राख्नुभएको भनाइलाई भारतीय प्रधानमन्त्रीले खण्डन गरेकाले नाकाबन्दीको समस्या समाधान हुनेमा ढुक्क हुन नसकिने बताउनुभएको छ..
भारत र चीनको विकासबाट लाभ लिन चाहन्छौँ :प्रधानमन्त्री
नयाँ दिल्ली । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाल आफ्ना छिमेकी भारत र चीनको तीव्र आर्थिक विकासबाट लाभ लिएर अघि बढ्ने बताउनुभएको छ । आफ्नो राजकीय भ्रमणको चौथो दिन नयाँ दिल्लीको भारतीय..
​आजैबाट भरी सिलिन्डर ग्यास बेच्न दिने सरकारको निर्णय
काठमाडौं । सरकारले सिलिन्डरमा आधा ग्यास भरेर बेच्ने निर्णय उल्ट्याएको छ । आपूर्ति मन्त्रालयले अब नाकाबन्दी अघि कै ब्यवस्थाअनुसार पूरा तौलको ग्यास सिलिन्डर बजारमा बिक्री गर्न दिने निर्णय गरेको हो..
​उपत्यका भित्रने चारवटै नाकामा विषादी अनुगमन
काठमाडौँ । काठमाडौँ उपत्यका भित्र्ने फलफूल तथा तरकारीमा विषादीको प्रयोग रहेको वा नरहेको भन्नेबारेमा नियमितरुपमा अनुगमन सुरु गरिएको छ । खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग र बाली संरक्षण निर्देशनालयबाट उपत्यका..
‘वान टु वान’ भेटवार्तामा ओलीले मोदीलाई के भने
नयाँदिल्ली । शनिबार ओली र मोदीबीच ३५ मिनेट ‘वान टु वान’ भेटवार्ता भएको थियो । ‘३५ मिनेटको कुराकानीमा ३० मिनेटजति प्रधानमन्त्री ओलीले बोल्नुभएछ, बााकी ५ मिनेट मोदीजीले बोल्नुभएछ,’ सहभागी स्रोतले..
​प्रधानमन्त्रीको भ्रमणसम्बन्धमा भारतीय पत्रपत्रिका के भने
नयाँदिल्ली । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजकीय भारत भ्रमण र उहाँका समकक्षी नरेन्द्र मोदीलगायत उच्चस्तरीय भेटवार्ताको समाचारलाई भारतका अधिकांश सञ्चारमाध्यमले प्राथमिकता दिएका छन् । ती सञ्चारमाध्यमले ओलीको भ्रमणबाट नेपाल–भारतबीचको सम्बन्ध..
भारतले सम्मान दियो, अडान फेरेन, ‘प्रेसमिटमा मोदी–ओली खुलेनन्
नयाँदिल्ली । प्रधानमन्त्री केपी ओली र भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीबीच शनिबार हैदराबाद हाउसमा ३५ मिनेट कुराकानी भयो । त्यसपछि दुवै देशका प्रतिनिधिमण्डलबीच आधा घन्टा औपचारिक वार्ता भयो । नेपालले संविधानको..
​प्रधानमन्त्रीको भ्रमण दलमा निजी क्षेत्रका व्यवसायी
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शुक्रबारदेखि गर्नुभएको भारतको ६ दिने राजकीय भ्रमणमा निजी क्षेत्रबाट नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष पशुपति मुरारका नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डल सहभागी भएको छ । महासंघको प्रतिनिधिमण्डलमा सूचना..
दिल्लीमा प्रधानमन्त्री ओलीको भव्य स्वागत
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी ओलीको भारतमा भव्य स्वागत भएको छ । ओलीलाई लिन भारतीय बिदेशमन्त्री सुष्मा स्वराज आफैं विमानस्थल पुगेकी थिइन् । प्रधानमन्त्री ओलीलाई एयरपोर्टबाट राष्ट्रपति भवनमा लगिएको छ । जहाँ..
​पृथ्वीभन्दा दश गुणा ठूलो ग्रह भेटियो
काठमाडौं । वैज्ञानिकहरू सौर्यमण्डलका अनेक रहस्य खोतल्न तल्लिन छन् । यही क्रममा नयाँ नयाँ तथ्यहरू पनि फेला परिरहेका छन् । पछिल्लो ‘इन्भेन्सन’का रूपमा अमेरिकाका अन्तरिक्ष वैज्ञानिकले सौर्य मण्डलमा नयाँ ग्रहको..
​बेलायती महारानीको शीरमा रहेको कोहिनुरमाथि भारत र पाकिस्तानको दाबी
लण्डन । बेलायती महारानीको ताजमा जडित कोहिनुर हिराबारे भारत र पाकिस्तानले आ–आफ्नै दाबी गर्दै आएका छन् । दुबै मुलुक उक्त हिरा आफ्नो भएको दाबी गर्दै फिर्ता ल्याउन चाहिरहेका देखिन्छन् यद्यपि..
ओलीको स्वागतमा दिल्लीमा तामझाम, भारतमा कहिले, ककस्लाई, कहाँ भेटदैछन प्रधानमन्त्री
काठमाडौं । नेपाली प्रधानमन्त्रीलाई स्वागत गर्न भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी मात्र होइन राष्ट्रपति मुखर्जी पनि उत्साही छन । भारतीय राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जीको चाहना र भारत सरकारको इच्छाअनुसार प्रधानमन्त्रीको भ्रमण राजकीय हैसियतमा हुन लागेको छ..
​बाघ मार्ने ‘बाबरिया’ सञ्जाल भत्काउँदै अनुसन्धान ब्युरो
भीमदत्तनगर । दुई वर्षअघि गठन भएको प्रहरीको सुदूरपश्चिम क्षेत्रीय अनुसन्धान ब्युरो ९आरआइटी०ले आफ्नो अभियानलाई अघि बढाएपछि बाघका नौ थान छालासहित १८ जना अभियुक्त पक्राउ गर्न सफल भएको छ। केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोको..
​प्रमको भारत भ्रमण शुक्रबारदेखि, राजकीय सम्मान पाउने ओली दोस्रा प्रम
काठमाडौँ । नेपालको इतिहासमै छिमेकी भारतको राजकीय भ्रमण गर्ने दोस्रो कार्यकारी प्रमुखका रुपमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली शुक्रबार नयाँ दिल्ली प्रस्थान गर्दै हुनुहुन्छ । आपसी मित्रतालाई पूर्ववत् अवस्थामा फर्काई अझ मजबुत..
समानुपातिक समावेशिता हुने गरी आमसञ्चार नीति आउने
काठमाडौँ । सूचना तथा सञ्चारमन्त्री शेरधन राईले स्पष्ट नीतिका आधारमा सञ्चार क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्नका लागि सूचना तथा सञ्चारसम्बन्धी उच्चस्तरीय समिति गठन गरिएको बताउनुभएको छ । समितिको घोषणा गर्न आज मन्त्रालयमा आयोजित..
राससले ५५ वर्षमा प्रवेश अबसरमा अनलाइन सेवालाई थप परिकृष्त
काठमाडौं । मुलुकको एकमात्र समाचार संस्था राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस) आज स्थापनाको ५४औँ वर्ष पूरा गरी ५५औँ वर्षमा प्रवेश गरेको छ । राससले हरेक दिन बिहान ६ः०० देखि राति ११ बजेसम्म..
Results 1994: You are at page 55 of 67